ဦးတင်ဝင်း December 15, 2012 - 1:09 pm မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်လို့ နိုင်ငံမျက်နှာကြည့်နိုင်ဘို့..
Reply မမ December 15, 2012 - 2:03 pm အားကစားညွှန်ချုပ်များနှင့်အားကစားဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများသည်အားကစားသမား
Reply Shingyi December 15, 2012 - 3:36 pm The officials from the sports department boughtalot of assist equipment(the third grade)
Reply မြန်မာ December 15, 2012 - 7:28 pm ပြည်ထောင်စု အားကစားဝန်ကြီးကတော့ နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းတွင် ရွှေတံဆိပ် ၁၀၀ ဖြင့် နိုင်ငံအလိုက် ပထမနေရာ ရောက် အောင် ကြိုးစားကြရန် အားကစားသမားများကို တိုက်တွန်းထားသည်။
Reply မောင်စိုင်း December 15, 2012 - 8:14 pm မမကျေးဇူး မမေ့ဘူး။ ၃၀%
Reply အောင်ကြူး December 15, 2012 - 9:45 pm ဘာမှလုပ်မနေနဲ့.. ရွှေတံဆိပ် တရာမကလို့ တထောင်လိုချင်လား တရုတ်တန်းရွှေဆိုင်သွား ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဝယ်တပ်လိုက်.. အဲဒါသေချာတယ်…။ Reply yemyn December 16, 2012 - 8:48 am Don’t only interest on medal and position must show the big country with big heart (Win or loss is not important justify is more important).
Reply ညီစေမင်း December 16, 2012 - 11:59 am ကိုယ့်မြေ ကိုယ်ရေ မှာ နိုင်ငံ အရှက်မကွဲဖို့လိုတယ် ၊ ဖိုးသင်းမျောက် မဖြစ်ဖို့လိုတယ် ၊ အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ရမယ်
Reply yemyin December 16, 2012 - 5:35 pm Try to get the good image for the country. (For game and sport man@woman)